ဧရာဝတီ| August 30, 2012 | Hits:6,633
ဘာကို ဘယ်လို ရေးကြမလဲ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Mya Winf August 30, 2012 - 9:25 pm	‘ဒု ၀န်ကြီးများကို အသစ်ခန့်အပ်ရာတွင် စစ်ဘက်နှင့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့မှ မဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကျွမ်းကျင်သူ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ ဖြစ်သောကြောင့်’
Reply	swe htwe August 31, 2012 - 12:41 am	We are on your same sides,Mr President.
Reply	ဘုရင် August 31, 2012 - 1:02 pm	လူဆိုတာနေရာရလာရင် ဘယ်သူမဆို စားမှာသေချာပါတယ်။ သင့်ရုံစား၊တော်ရုံစားရင် နိုင်ငံ အတွက် အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ ဆွေမျိုး(၁၄)ဆက်လောက်ဝအောင်စားကြမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံမွဲ သထက်မွဲပြီး နလံထူမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Reply	maung August 31, 2012 - 5:11 pm	U Myint Hlaing (Minister of Agriculture and Irrigation Ministry) and his members, U Ohn Than, Deputy Minister and some Director Generals are also resigned their position by force. Please check their properties and what they have done.
Reply	sannayyar August 31, 2012 - 11:36 pm	The article is imaginary.
Reply	hlamyint September 4, 2012 - 9:46 am	Whoever U THein Sein appoints must be highly educated & at least 10-15 yrs of work experience in that field.